हामीले सहरलाई मगन्तेरहित बनाएका छौं : प्रधानमन्त्री ओली
केपी शर्मा ओली शुक्रबार, असोज ९, २०७७, २२:२८
प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ
म तपाईंहरू सबैलाई गौतम बुद्ध र सगरमाथाको भूमि नेपालबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु।
मेरो देश नेपाललगायत संसारभर कोभिड-१९ का कारणले भएको मानवीय क्षतिप्रति विश्वका अन्य नेताहरूसँगै म पनि गहिरो दुःख तथा समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु।
ब्युरोको अध्यक्ष तथा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकोमा यहाँहरूलाई बधाई दिँदै तपाईंहरुप्रति नेपालको पूर्ण समर्थन रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ७४औं महासभा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर निवर्तमान् अध्यक्ष हाम्रो प्रशंसाको पात्र बन्नुभएको छ।
यस कठीन क्षणमा संयुक्त राष्ट्र संघलाई उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले गर्नुभएको अथक प्रयासको प्रशंसा गर्न चाहन्छु।
हामी असाधारण समयबाट गुज्रिरहेका छौं। अतुलनीय संकटका रूपमा कोभिड-१९ महामारी सामना गरिरहेका छौं। सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको गहिराई होस् वा जनजीविका तथा समाजमा परेको प्रभाव होस् वा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी होस्, महामारीको दुष्प्रभाव अत्यन्त ठूलो छ।
महामारी विरूद्ध विश्वव्यापी प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेका संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्वको प्रयासप्रति हाम्रो समर्थन रहेको छ। खासगरी कोभिड-१९ विरूद्धको बृहद प्रतिकार्य कार्यक्रमको शुरूवात गर्नुभएकोमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको सराहना गर्दछौं।
जारी स्वास्थ्य संकटमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको कोभिड विरूद्धको खोप विकासपश्चात सबैका लागि सुपथ, सरल र सहज पहुँच; ज्ञान तथा अनुभवको साटासाट र औषधि तथा औषधिजन्य उपकरणको समयमै आपूर्ति हो।
विश्व व्यवस्थामा देखापरेको अनिश्चितताको पृष्ठभूमिमा यस्तो संकट आउनु चिन्ताजनक विषय हो। भूराजनीतिक टकराव पुनः देखापरेका छन्। विश्वका कैयन भागमा शान्ति र स्थिरताको आकांक्षा अझै पनि हासिल हुन सकेको छैन।
हतियारको होडबाजी, जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोपका चुनौतीले शान्ति र दिगो विकासको सम्भावनालाई अवरोध पुर्‍याएको छ।
अदृश्य भाइरसले विद्यमान् असंगतिको गहिराईलाई टड्कारो बनाइदिएको छ। यसले व्यापार विवाद, विश्वव्यापी असमानता, वित्तीय अनिश्चितता तथा ऋण संकटलाई थप चर्काइदिएको छ।
एकपक्षीयतावादी प्रवृत्ति तथा संरक्षणवादी नीतिले गर्दा बहुपक्षीय सहयोग स्वभाविक मारमा परेको छ।
बहुपक्षीयताको सान्दर्भिकता अझ बढी प्रष्फुटित हुनुपर्ने यस समयमा बहुपक्षीयतालाई अवमुल्यन गर्ने कुरा सोच्न सम्म पनि सकिदैन। बहुपक्षीयता र विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधार साँगुरो राष्ट्रिय हितभन्दा पनि विश्वव्यापी कल्याण हुनुपर्दछ।
संयुक्त राष्ट्र संघको यो ७५औं ऐतिहासिक महासभा सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा ऐक्यबद्धताका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति एकत्रित गर्ने समय हो। यो सुरक्षित, न्यायपूर्ण तथा समन्यायिक भविष्यको परिकल्पना गर्ने समय पनि हो।
आउँदा कठिन महिना तथा वर्षहरू सामना गर्न सहकार्यपूर्ण, लोकतान्त्रिक, विज्ञानमा आधारित तथा समन्वयपूर्ण विश्वव्यापी साझेदारीले मात्र सहयोग पुर्याउनेछ।
अति कम विकसित राष्ट्र, अतिकम विकसित भुपरिवेष्ठित राष्ट्र तथा विकासशील टापु राष्ट्रले स्रोत, सामाजिक सुरक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य संरचनाहरूको सिमितताको सामना गरिरहेका छन्। पर्यटन र विप्रेषणमा रोकावट, आपूर्ति श्रृङ्खला तथा व्यापारमा देखिएको अवरोधले विपत्तिलाई झनै जटिल बनाइदिएको छ।
विगत बीस वर्षमा पहिलोपटक विशेषगरी विकासशील मुलुकहरूमा गरिबी बढिरहेको छ।
असमानता थप गहिरिनबाट रोक्न दिगो विकासका लक्ष्यहरू समयमै हासिल गर्ने विषय हाम्रा प्रयासको केन्द्रबिन्दु, आकांक्षाको दिशानिर्देशक एवम् पुनःस्थापनाको संकेत चिन्ह हुनुपर्दछ। हाम्रा प्रयासहरु समाजको पिँधमा रहेका मानिससम्म पुग्नु पर्दछ।
यमन, सिरिया र लिबियामा विग्रदो मानवीय अवस्थाबाट नेपाल अत्यन्त चिन्तित छ।
लामो द्वन्द्वले निर्दोष नागरिकमाथि गहिरो दुःख कष्ट पुर्‍याउँछ।
सम्बन्धित देशका नागरिकको स्वामित्व र नेतृत्वमा सबै त्यस्ता द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि नेपाल आव्हान गर्दछ।
हामी संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित प्रस्तावहरूका आधारमा सुरक्षित र मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमानासहित शान्ति र सुरक्षाका साथ अस्तित्वमा रहने गरी
इजरायल र प्यालेष्टाइनका लागि दुई राष्ट्रको समाधानसहित मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थायित्व भएको हेर्न चाहन्छौं।
शान्ति स्थापनार्थ प्रहरी तथा सेना पठाउने एक प्रमुख राष्ट्र एवम् शान्ति निर्माण आयोगको सदस्यको रूपमा नेपालले सदैव विना-अतिरिक्त शर्त संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा प्रहरी तथा सेना खटाउदै आएको छ।
त्यसको केही सानो अंश मात्रले पनि गरिबी, भोक र अभावमा पिल्सिएका लाखौं मानिसलाई राहत मिल्न सक्छ।
हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले कुन कुराको बढी आवश्यकता छः पारमाणविक हतियार वा कोभिड-१९ विरूद्ध खोपमा पहुँच!
संसारलाई अझ बढी मास्क चाहिएको छ न कि बन्दुक; स्वास्थ्य सुरक्षाका साधनहरू चाहिएको छ न कि विध्वंसात्मक हतियारहरू; जीवन रक्षाका लागि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी चाहिएको छ न कि जीवन विनाशका लागि सैनिक खर्च।
आणविक अप्रसार सन्धिको पुनरावलोकन सम्मेलन लगायत निशस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रक्रियाहरु स्थगन भएको वर्तमान अवस्थामा विश्वलाई सुरक्षित बनाई राख्न सम्बन्धित पक्षहरुले सन्धि अन्तर्गतका दायित्व पूरा गरिरहनु पर्छ।
सबै आम विनाशकारी हातहतियारको सामान्य र पूर्ण निशस्त्रीकरणका लागि हामीले गर्दै आएको आव्हानलाई पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छौं।
हाम्रा पर्वतबाट बग्ने हिमनदीहरूले सामुद्रिक इकोसिस्टम र जलवायुमा योगदान पुर्‍याएका छन्। नेपालका हिमालहरूले प्राकृतिक रूपमा नै जलवायुलाई स्थिर राख्ने कार्य गरेका छन्। पृथ्वीको कर्कट र मकर रेखाको बीचमा रहेको सबैभन्दा तातो क्षेत्रमा पर्ने यी हिमालहरूले प्राकृतिक शितलन प्रणालीको कार्य गर्दछन्। यसका अतिरिक्त हिमालले जीवित प्राणीहरूका लागि स्वच्छ पानीको निरन्तर आपूर्ति गर्ने प्राकृतिक पुनर्सेचन प्रणालीमा योगदान पुर्याएको हुन्छ।
प्राकृतिक जलवायु प्रणाली कायम राख्नका लागि समुद्र र पर्वतबीच जैविकीय सम्बन्ध रहेको छ। त्यसैले नेपालका पर्वतहरू नेपालका मात्र निधी हैनन् यीनले त धर्तीकै स्वास्थ्य कायम राख्न योगदान गर्ने हुनाले विश्वव्यापी महत्व राख्दछन्।
हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू र उर्जा उत्पादन सबैभन्दा जलवायुमैत्री छन्। नमज्जाको व्यंग्य के छ भने हामी पारिस्थितिक प्रणाली कायम राख्न महत्वपूर्ण योगदान गर्छौं र नगण्य उत्सर्जन गर्छौं तथापि जलवायु परिवर्तनको कठोर मार हामीले नै खेप्छौं।
हामी पेरिस सम्झौताको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, जलवायुसम्बन्धी दरिलो प्रतिकार्य तथा जलवायु वित्तको सहज पहुँचका लागि आव्हान गर्दछौं।
अत्यधिक मानवीय क्रियाकलापका कारण समग्र सामुद्रिक पारिस्थितिक प्रणालीको बिग्रदो स्वास्थ्यप्रति हामी चिन्तित छौं। मानवमात्रको साझा सम्पत्तिको हामीले संरक्षण गर्नैपर्दछ। सबै साझेदारहरू र खासगरी तटीय राष्ट्रहरूको दूरदर्शिता सामुद्रिक पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणका लागि अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बाहिरको सामूद्रिक जैविक विविधता (BBNJ) प्रक्रियामा भएको प्रगतिको सराहना गर्दछ र यो प्रक्रियाको सफलतापूर्ण समापनको आशा गर्दछ।
प्रविधिमा भएको प्रगति नै विकास र परिवर्तनको मुख्य संवाहक रहँदै आएको छ। विद्युतीय व्यापार र प्रविधिको उचित लाभ प्राप्त गर्नका लागि अति कम विकसित मुलुकहरूको डिजिटल विभाजन र क्षमताको सिमितता सम्बोधन हुनु अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। ती मुलुकका लागि प्रविधिमा सहज र सस्तो पहुँच हुनै पर्दछ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनमा नेपालले दण्डहीनता सहन गर्दैन। जारी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई हाम्रो प्रतिवद्धता अनुरूप टुंगोमा पुर्याउन हामी पूर्ण रूपमा दृढ छौं। पीडितका समस्या सम्बोधन गरिनेछन्।
हाल मानव अधिकार आयोगको सदस्यको हैसियतले नेपालले वस्तुगत र निष्पक्ष भएर समग्र मानव अधिकारको प्रबर्द्धनमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ।
यस क्षेत्रमा अझ थप योगदान गर्न सन् २०२१-२०२३ कार्यकालका लागि नेपालले मानव अधिकार परिषदमा पुनःनिर्वाचनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छ। हाम्रो उम्मेदवारीमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्यहरूको अमुल्य सहयोग प्राप्त हुने कुरामा भरोसा राखेका छौं।
मैले संयुक्त राष्ट्र संघको ७३औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा भएको अभुतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन र जनप्रतिनिधिद्वारा लिखित लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत यसको सुदृढीकरण गरिएको बारेमा बताएको थिएँ।
हामीले देशलाई खुला दिसामुक्त बनाउदै मर्यादित जीवनयापन गर्ने शैलीको नयाँ युग सुरू गरेका छौं।
हामीले भूकम्पको घाउ पुरेका छौं; घर, विद्यालय, कलेज, अस्पताल र सम्पदास्थलको पुननिर्माण गरेका छौं; असुरक्षित क्षेत्रबाट मानव वस्तिलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थान्तरण गरेका छौं। यी उपलब्धिहरूबाट हाम्रा जनताले आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरूको फराकिलो उपभोग गरिरहेको दर्शाउँछ।
यीनै सिद्धान्तहरूमा आधारित भई नेपाल सरकार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्रराष्ट्रसँग असल सम्बन्ध कायम गर्न प्रतिवद्ध छ। समानता, आपसी सम्मान र न्यायमा आधारित स्वच्छ र समावेशी विश्व व्यवस्थाको हामी समर्थन गर्दछौं।
संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीयता सहितको बहुपक्षीयतामा नेपालको अविचलित विश्वास रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्लाई अझ प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र जवाफदेही बनाउन हामी सुरक्षा परिषद्को सुधारमा जोड दिन
चाहन्छौं। सबै सुधार प्रयासहरूको केन्द्रमा सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त रहनुपर्दछ।
हामी महासचिवले सुरू गर्नुभएको सुधार प्रयासहरूको समर्थन गर्दछौं; साथै यसबाट सहायता जरूरी पर्ने मुलुकमा उल्लेख्य सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौं।
जसरी दोस्रो विश्व युद्धबाट विनाश भएको विश्वलाई शान्ति, विकास र सुरक्षाको पथमा लैजान संयुक्त राष्ट्र संघको सिर्जना भएको थियो, त्यसरी नै अदृश्य तर उत्तिकै शक्तिशाली कोभिड-१९ को परिप्रेक्षमा स्वस्थ र समुन्नत विश्वको परिकल्पना हामीले किन नगर्ने ?
त्यसैले, यस ऐतिहासिक ७५औं महासभामा ती मुल्यहरूको रक्षा गर्ने प्रण गरौं र मानव शान्ति र समृद्धिको दिशामा ऐक्यवद्धता र सहयोगको भावनाका साथ सँगै कार्य गरौं।
(संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५औं महासभामा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भर्चुअल सम्बोधनको पूर्णपाठ)
राजनीतिक जीवन सिध्याउने गरी ल्याइएको आरोपपत्र अस्वीकार गर्छु
महामारीविरुद्धको हाम्रो लडाईं राजनीति स्वार्थहरूको टकरावसँग सम्बन्धित छैन